Bacijwe ngesiZulu aboKhozi FM | Isolezwe
Izindaba / 12 October 2017, 08:46am / KHETHA SANGWENI
Abanye babasakazi boKhozi FM akade bekhona ngesikhathi befundiswa ulimi lwesiZulu Izithombe: TWITTER
Bafundiswe kabanzi ngokusetshenziswa kolimi lwesiZulu abasakazi besiteshi esihamba phambili kuleli Ukhozi FM.
Abasakazi, abadidiyeli ngisho nabaphathi imbala bebehlangene esikhungweni semfundo ephakeme e-UKZN ophikweni lwayo, i-Howard College izolo. Umphathi siteshi, uMnuz Bonga Mpanza, uthe ukufundiswa kwabo ulimi lwesiZulu kusuke kuyingxenye yokucija abasakazi okuyinto esazoqhubeka.
“Akuyona into entsha ukuqeqeshwa kwabasakazi ngoba phela ulimi sisebenza ngalo kakhulu emsakazweni. Kubalulekile ukuthi sihlale siqinisekisa ukuthi silusebenzisa ngendlela ulimi lwesiZulu,” kusho uMpanza.
Uqinisekise nokuthi izifundo zesiZulu zihlinzekwa yisikhungo i-UKZN emkhakheni wezoLimi.
Umqondisi emkhakheni wezoLimi kulesi sikhungo uDkt Langa Khumalo, uthe kuyintokozo kubona ukubambisana nomsakazo omkhulukazi kuleli, ekuqinisekiseni ukuthi ulimi lwesiZulu lusebenza ngendlela efanele.